गगन थापाबारे विश्वप्रकाश शर्माकाे भनाईले शर्मा एकाएक चर्चामा - Sudur Khabar
गगन थापाबारे विश्वप्रकाश शर्माकाे भनाईले शर्मा एकाएक चर्चामा
Ganesh Thagunna January 11, 2018 अन्तरवार्ता 0
Total Reader : 101
मंगलबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी प्रवक्तामा विश्वप्रकाश शर्मालाई मनोनित गरेका छन्। केहि दिनअघि मात्र चुनावी पराजयको समिक्षा गर्नका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति र महासमिति बैठकको माग गर्नेमध्येका शर्मालाई देउवाले प्रवक्तामा मनोनित गरेका हुन्। गगन थापा लगायतका युवा नेताहरूसँग मिलेर नेतृत्व परिवर्तनको अभियानमा सहभागी भएका शर्मा पार्टीको प्रवक्ता भएपछि अब कसरी अगाडि बढ्छन् त? कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा नेपालखबरका मनोज खतिवडा र आकाश क्षेत्रीले गरेको वार्ताको सम्पादित अंशः
गगन थापालाई पार्टी प्रवक्ता बनाइयो भनेर केहि समय अगाडि प्रचारसमेत गरिएको थियो, तर एक्कासी तपाईं पो प्रवक्ता बनेर आउनु भयो त?
निर्वाचनभन्दा अगाडिको सन्दर्भ थियो त्यो। पार्टी प्रवक्ताको अहिले भन्दा बास्तवमा त्यसबेला बढि जरुरी थियो। मैलेभन्दा राम्रो ढंगले पार्टीको कुरा सम्प्रेषण गर्ने क्षमता गगन थापाले राख्नुहुन्छ। तर किन हो त्यसबेला प्रवक्ता बनाउने कुरा पार्टीले सोचेन, सभापतिले सोच्नुभएन। हामी चुनाव हार्नुका थुप्रै कारणहरु मध्ये आफ्नो कुरा राम्रोसँग सम्प्रेषण गर्न नसक्नु पनि हो। गगन थापा प्रवक्ता बन्नुभएको भए मभन्दा सुयोग्य साथीले जिम्मेवारी पाउनुहुन्थ्यो। म काठमाडौंभन्दा बढि समय झापा बसिरहेको मान्छे। १०–११ वर्षदेखि बढि समय झापा बस्छु। बेलाबेला काम विशेषले काठमाडौं आउँछु। बैठक हुनेबेला, विदेश जानेबेला, व्यवसायिक काम परेको बेला काठमाडौं आउँछु। तर एकाएक सभापतिजीले अहिलेको सन्दर्भमा विश्वप्रकाशलाई बनाउँ भन्ने सोच्नुभयो। उहाँले सोचेपछि स्वभाविक रुपमा त्यो जिम्मेवारीलाई बोकेर अगाडि बढ्नेतर्फ लागें।
केहि दिनअघि गगन थापासहित तपाईंहरू ७ जना युवा नेताले निर्वाचन पराजयको समिक्षा गर्न केन्द्रीय समिति र महासमितिको बैठक बोलाउनुपर्ने माग गर्नुभयो, अब प्रवक्ता भएपछि पनि त्यो मागमा तपाईं अडिग नै रहनुहुन्छ कि बोली फेरिन्छ?
७० कटेका पार्टी नेता राजनीतिबाट रिटायर्ड हुनुपर्छ र त्यो नै अहिलेको सन्दर्भमा बेस्ट मेडिसिन हो भन्ने केहि साथीहरुलाई लाग्यो। मैले त्यसैबेला राजनीतिलाई एज (उमेर) ले होइन एजेण्डाले ड्राइभ गर्छ भनेको थिएँ। त्यसैले सत्तरी कटेकाले छाड्नुपर्छ, यति कटेकाले बस्नुपर्छ भन्ने भन्दा एउटा सिस्टम बसाउँ न। ५५ वर्षको उमेरमा बाराक ओबामा घर फर्किए त, त्यो कुनै उमेरको कारण होइन त्यहाँको सिस्टमका कारण हो नि। हामी त्यस्तो पद्धतिको खोजी गर्नेभन्दा आवेगमा ७० कटेकालाई निकाल्दिउँ भन्नेतिर गयौं। कसैको कपाल फुलेको छ ऊ अयोग्य कसैको कपाल कालो छ ऊ योग्य भन्ने हुँदैन भनेर मैले त्यसैबेला पनि भनेको थिएँ। सत्तरी काटेकालाई हटाउँ भन्ने कुरा त्यही कारण हामी सात जनाको विज्ञप्तिमा छैन। हामीमध्ये कतिपय साथीहरुले विशेष महाधिवेशनबाट समाधानमा पुगौं भन्नुभयो, सातजनाको विज्ञप्तिमा त्यो पनि छैन। सातजनाको विज्ञप्तिमा जे छ त्यसको स्पिरिटप्रति म अहिलेपनि प्रतिवद्ध छु। त्यो भनेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्नुपर्छ, गम्भीर आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ, महासमितिको बैठकमार्फत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रकृयामा जानुपर्छ।
नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा प्रवक्ता हुनुअघि जुन ठाउँमा हुनुहन्थ्यो, अहिले पनि तपाईंको धारणा त्यही हो?
प्रवक्ता हुनु अगाडि म जुन ठाउँमा उभिएको थिएँ, प्रवक्ता भइसकेपछि पनि म त्यहिँ छु। पहिला केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइयोस् भन्ने ठाउँमा थिएँ अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक चाँडै बस्छ भन्ने ठाउँमा आइपुगें। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक हुने कि नहुने भन्ने ठाउँमा गएको छैन। त्यसबेला विशेष महाधिवेशन हुनुहुन्न भनें अहिले मैले त्यसो भन्दिनँ। प्रवक्ताका रुपमा मैले पार्टीको विधानलाई पनि हेर्नुपर्छ र पार्टीको विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले आवश्यक ठानेमा विशेष महाधिवेशन हुन सक्छ भन्छ। निश्चित महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेमा तीन महिनाभित्रमा विशेष महाधिवेशन केन्द्रले बोलाउनुपर्छ। प्रवक्ता भइसकेपछि त्यो प्रकृयामा गएको छैन भने मैले हुँदैन भनेर बोल्न मिल्दैन। पार्टीको विधानमा व्यवस्था भएको चीज प्रवक्ताले हुँदैन भन्न पाइँदैन। मुद्दागत हिसाबले म धेरै फरक ठाउँमा छैन।
पार्टी सभापतिबाट प्रवक्तामा मनोनित भइसकेपछि पार्टीलाई लिएर तपाईंका योजनाहरु के के छन्?
यत्रो लामो संक्रमणकाल अन्त्य गर्न नेतृत्व गरेको कांग्रेसले निर्वाचनमा जुन ढंगको पराजय बेहोरेको छ, त्यसका आन्तरिक र बाह्य दुईवटै कारण छन्। कांग्रेसका घरेलु कारणपनि छन् र एमाले र माओवादी केन्द्र एकतावद्ध भएका कारणपनि छन्। यो वा त्यो जेसुकै कारण होस्, आगामी दिनमा कांग्रेस सुदृढ बन्ने दिशामा जाने विषय व्यक्तिगत भन्दापनि समुहगत कुरा हो। यो सिंगो कांग्रेसको कुरा हो। युवाको वा पाकाको भन्ने होइन। नेपाली कांग्रेसलाई आज ठूलो क्षती भएको छ भन्नेमा सबै सहमत छन्, पार्टीमा रुपान्तरण जरुरी छ भन्नेमा सबै सहमत छन्, रुपान्तरण कसरी गर्ने भन्नेमा फरक धारणाहरु हुन सक्छन्। ती धारणाहरुलाई एकताबद्ध बनाएर कांग्रेसलाई आधुनिक राजनीतिक दलका रुपमा रुपान्तरण गर्ने कुरामा केन्द्रीय सदस्यका रुपमा पनि म प्रतिबद्ध थिएँ। प्रवक्ताका रुपमा पार्टीका नीति, कार्यक्रम र सन्देशलाई सम्प्रेषण गर्ने कुरामा पनि म अझ गम्भीर भएर लाग्छु।
मान्छेहरुले भन्ने गरेका छन्, कांग्रेससँग गौरवान्वित हुनलाई उसको विगत छ तर वर्तमान र भविष्यका लागि कुनै सपना छैन, त्यस्तै हो?
कांग्रेसलाई सपनाविहिन पार्टी भनेर कसैले भन्छ भने त्यो विल्कुलै गलत कुरा हो। लोकतान्त्रिक प्रकृयामा नेपाली समाजको सबै शक्तिलाई गाँस्ने भन्दा ठूलो सपना एउटा देशको समृद्धिका लागि अर्को के हुन सक्छ? बाटो बनाउने, विजुली निकाल्ने, उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने सपनाहरु निश्चय नै जरुरी छन् तर त्यो गर्नका लागि देशलाई चाहिने कुरा के त? त्यसका लागि पहिलो कुरा स्वाधिनता चाहियो, स्वाधिनताको सपना कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको थियो। सबैलाई संगै लिएर जाने समावेशीता चाहियो, त्यो सपना २०१५ सालबाट कांग्रेसले शुरु गरेको थियो। हिंसाबाट मुक्ति गर्नलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको जडसुत्रीय चिन्तनलाई रुपान्तरण गर्न र उनीहरुको पनि लोकतान्त्रिकरण गर्ने सपना कांग्रेसकै सपना थियो। आजको दिनसम्म आइपुग्दा आफ्नामात्र होइन अरुका पनि सपनालाई व्यवहारिक मार्गमा रुपान्तरण गर्ने कर्ममा कांग्रेसले साथ दिँदै आएको छ। त्यसैले सपना नभएको पार्टी भनेर कांग्रेसलाई विश्लेषण गरियो भने मेरो बुझाइमा त्यो वस्तुगत हुँदैन।
नेपाली कांग्रेस अन्य पार्टीले लगाएका आरोपलाई समेत खण्डन गर्न नसकेर आफैंभित्र हराइरहेजस्तो, अलमलमा परेजस्तो अवस्थामा देखिन्छ, यसको संकेत के हो?
एउटा राम्रो सामान उत्पादन गर्नु र त्यो सामानलाई बजारमा ब्रान्डिङ गर्नुका बीचमा फरक हुन्छ। बजारमा चलेका यस्ता धेरै सामान छन् जसले विज्ञापन गर्न बन्द गरेका छैनन्। नेपाली कांग्रेसले आफ्ना डिपार्टमेन्टल स्टोरमा धेरै राम्रा सामानहरु उत्पादन ग¥यो तर त्यसलाई ब्रान्डिङ गरेर बजारमा बेच्ने सन्दर्भमा निश्चय नै कमजोरी भएको छ। यो देशको गाउँमा रहेकी एउटी आमालाई दशैंको बेला छोरो सिपाहीबाट फर्केर टिका लगाउन सहि सलामत आइपुग्छ, छोरो मारिएर बोरामा भरिएर आइपुग्दैन भन्ने कुराको नायकत्व कांग्रेसले गरेको थियो भनेर बुझाउन सकिएन। नेपालको शान्ति प्रकृयाको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको भन्ने हामीले बुझाउन सकेनौं। दैलेखका डेकेन्द्र थापाजस्तो पत्रकारिता गर्न गएको कुनै युवाले खाल्डोमुनी कहिँ गाडिनुपर्ने दिन थिए, त्यो दिनको अन्त्य भयो भनेर बुझाउने सन्दर्भमा कमजोरी भयो। अथवा, किराना पसलेलाई तपाईं चन्दा आतंकबाट मुक्त हुनुभयो भनेर बुझाउने कुरामा खोइ हामी सफल भयौं?
शान्ति प्रकृयामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको नायकत्व हामीले सेल गर्न सकेनौं। चारचार जना प्रधानमन्त्री हुँदा निर्माण हुन नसकेको संविधान कांग्रेसको पालामा निर्माण भयो, हामीले नेतृत्व गरेका हौं भनेर आत्मविश्वासका साथ जनतालाई भन्न सकेनौं। कांग्रेस एक्लैले लेखेन अरुले पनि मसी हाल्नुभयो तर कलम त सुशील कोइरालाले समात्नुभयो होला नि। संविधान निर्माण भइसकेपछि कसैले मैनवत्ति बालेर स्वागत गरे कसैले टायर बालेर जलाए, सिंगो मधेसमा दर्जनौं मान्छे मरे। केपी ओलीले सभामा गएर बोल्ने अवस्था थिएन। तर त्यही मधेसमा कसले ग¥यो जादु? कांग्रेसले नै हो नि मधेस केन्द्रित दललाई निर्वाचन सारेर, फकाएर, संशोधन प्रस्ताव पास भएपनि चुनावमा जाने फेल भएपनि जाने भनेर सहमत गराएको। त्यत्रो मान्छे मरेको मधेसमा कांग्रेसले एउटापनि गोली खर्च नगरी स्थानीय निर्वाचन गरायो। त्यसलाई हामीले सेल गर्न सकेनौं। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हामीले मधेसमै भोट कम पायौं। नेपाली कांग्रेसले कर्म नगरेका कारण हारेको होइन, नीति गलत भएका कारण हारेको होइन। गरेका कामलाई सम्प्रेषण गर्न नसकेका कारण हामी हारेका हौं।
निर्वाचन परिणामलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र दुई खालको मत रहेको महशुस हुन्छ, पहिलो दुई वामपन्थी पार्टी मिलिसकेपछि पनि दोश्रो हुनुलाई गौरव ठान्ने र अर्को सर्वस्व सकिएको ठान्ने, यसमा तपाईँको मत के हो?
गौरव ठान्ने र गम्भीर हुने दुईवटै कुरा यसमा गाँसिएको छ। लामो संक्रमणकालको अन्त्य यो निर्वाचन मार्फत भएको छ, यसमा गौरवान्वित हुनुपर्छ। राष्ट्रव्यापी रुपमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन हुँदा, स्थानीय तहका पहिलो र तेश्रो दल एक ठाउँमा आउँदा जुन गणित र मनोविज्ञान बन्दै गयो त्यसको जगमा हामी हार्दैछौं भन्ने पूर्वसुचना त थियो नि। सारा सुचना पुग्ने देशको प्रधानमन्त्रीकहाँ प्रतिकुल अवस्था छ, चुनाव हामीले हार्दैछौं भन्ने सुचना थिएन होला र? अवश्य थियो। अनेकले आशंका गरे निर्वाचन सार्छन् भनेर तर कांग्रेसले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो। हामीले संक्रमणकाल अन्त्य गर्नलाई नेतृत्व ग¥यौं भन्ने गर्व छ हामीलाई। नेतृत्व त ग¥यौं संक्रमणकाल अन्त्यको तर हामी निर्वाचनमा उपविजेता बन्न पुग्यौं। यसमा कांग्रेस गम्भीर छ। त्यसैले गम्भीरता र गौरव दुईटै कुरा यससँग गाँसिएको छ। गौरवलाई पुँजिकृत गर्दै लिएर जाने हो र गम्भीरताको पाटोमा थप गम्भीर भएर कांग्रेसलाई रुपान्तरण गर्दै जाने हो। हाम्रो सामु प्रष्ट रुपमा दुईवटा दायित्व छन्।
प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा नै नेपाली कांग्रेसले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेको खुलासा गरेका छन्, तपाईँहरुले गठबन्धनभित्र खेल्न र टुटाउन खोज्नुभएको हो?
सडकमा कसले कुन सन्दर्भमा के बोल्नुभयो भन्ने कुराको जवाफ मैले कांग्रेस प्रवक्ताका रुपमा दिनु उचित हुँदैन। नेपाली कांग्रेस जनताले दिएको म्याण्डेट बमोजिम प्रतिपक्षमा बस्ने तर्फ नै गम्भीरतापूर्वक लाग्छ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठन गर्न पाउने व्यवस्था छ। बहुमत प्राप्त दल कुनै छैन तर एमाले र माओवादीको गठबन्धनका नाममा उहाँहरु एकीकृत भएर जाँदैगर्दा दुई वा दुईभन्दा बढि दलले सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा उहाँहरु हुनुहुन्छ। कसैले कुनै रुपमा कहिँ भन्नुभयो होला तर अहिले नेपाली कांग्रेस संवैधानिक रुपमा भनिएको तर संवैधानिक नभएर व्यवहारिक रुपमा रहेका जटिलतालाई हल गर्दै नयाँ सरकार गठनलाई मार्गप्रशस्त गर्नेतर्फ लाग्छ। जहाँसम्म प्रचण्डजीले भनेको कुरा छ, उहाँले कुनै अमुक मिडियामा बोल्नुभयो भनेर तर्क गर्ने हो भनेपनि कुन मिडिया भनेर सोधे तपाईँहरुलाई पनि सम्झिन गाह्रो पर्छ। अनलाइनहरुमा त्यो कुरा आयो तर प्रचण्डले ठोस रुपमा फलानो ठाउँमा उभिएर मलाई देउवाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुभयो भन्ने मैलेचाहिँ सुनेको छैन।
आफ्ना कुरा स्पष्ट ढंगले राख्ने, लागेको कुरा बोल्ने तपाईँको स्वभाव देखिन्छ, पार्टीको जिम्मेवार स्थानमा बसेपछि यो स्वभावमा परिवर्तन आउने हो कि?
जीवन कसरी बाँच्ने भन्ने सन्दर्भमा मसँग जीवन दर्शनको आफ्नै डायरी छ। जसमा मैले के लेखेर राखेको छु भने जबसम्म विश्वप्रकाश शर्मा युवा उमेर बाँच्नेछ तबसम्म पाकोले जस्तो सोच्ने प्रयत्न गर्छ। पाका उमेरकै मान्छेले जस्तो बोल्ने प्रयत्न गर्छ। जब विश्वप्रकाश शर्मा पाको उमेरमा पुग्नेछ तब युवा जोशका साथ बाँच्न प्रयत्न गर्नेछ। जीवन दर्शननै मैले त्यस्तो लेखेर राखेको छु भने मैले आवेगका साथ, युवा उमेरजन्य उत्तेजनाका साथ विगतमा पनि बोल्दिनथें, अहिलेपनि बोल्दिनँ। त्यसैले जीवन बाँच्ने सन्दर्भमा आफ्नै दर्शन अनुसार म अगाडि बढ्नेछु।
जनताका लोकप्रिय बनेका नेता जनार्दनले भने भावी प्रधानमन्त्री केपी ओली नै
माओवादी केन्द्रका नेता लेखराज भट्ट भन्छन् : ‘प्रधानमन्त्री त ओली हुन्, राष्ट्रपतिबारे छलफलै भएको छैन’
अबको लडाई प्रदेश नम्बर ७ को विकास र अधिकारका लागि : लेखराज भट्ट